အရပ်ကတို့ – ပြင်းရှတဲ့ ၀ိုင်တစ်ခွက်ပေါ့
This entry was posted in ဟိုဟိုဒီဒီ and tagged funny, individualism, Life, strength. Bookmark the permalink.
← ရပ်တည်မှု၊ နားလည်မှု
စတေးနှင့် မလေး →
2 thoughts on “အရပ်ကတို့”
kom | June 14, 2009 at 1:49 pm
ကုမ်ရာသီသူ | June 14, 2009 at 8:01 pm
အမဂွိ။ တစ်ချက်ပြုံးရင် တစ်ရက် အသက်ပိုရှည်မယ်တဲ့။ (ကိုရင်ညိန်းကပြောတယ် 😀 ငှါးပြောတာ) ပြုံးပျော်ကြပါစေဗျား။